24 | June | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
To Mr James Mmt (Maung Maung Than) with love
To Mr James Mmt (Maung Maung Than) with love,
Congratulations for the very good impressive Cyber-trooper job for the hard line Myanmar Military’s radical group.
Congratulation again for the your success in the unrelenting spread of Hate Speeches against Islam, Muslims in Myanmar and especially on Bengali and Rohingyas.
Regarding this recent Riots, I wish to declare that asagood citizen of Myanmar, I am against the illegal immigrants irrespective of race and religion. And I am always ready to defend our beloved Myamar if there is any Foreign Invasion from any country including Bangladesh.
ကို James Mmt-အလွဲများစွာနဲ့အမြဲမမှားစေချင်ပါ
???JAMES MMT ? Mg Mg Than???
Source: ကို James Mmt- အလွဲများစွာနဲ့ အမြဲမမှားစေချင်ပါ by Ye Yint Thitsar
[[“သို့ ရဲရင့်သစ္စာ၊ မတရား အသတ်ဖြတ် ခံနေရတာကို ငြိမ်နေရမတဲ့လား……”]] တဲ့ ကို James Mmt ရေ တပ်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်က စပြီးလွဲနေတယ်ခင်ဗျ။ မတရားအသတ်ဖြတ်ခံနေရတာကို ငြိမ်နေပါလို့ ဘယ်သူကပြောခဲ့လို့ဘယ်သူ့ကို ကိုJames Mmt က ပြန်ပြောနေတာလဲ မသိဘူး။ ထားပါလေ၊ ကျွန်တော့်နာမည်တပ်ပြီးရေးလာတာဆိုတော့လည်း ပြန်ရေးရတော့မပေါ့ဗျာ။